I-Madrid Centric IV - Iqoqo le-Madflats - I-Airbnb
I-Madrid Centric IV - Iqoqo le-Madflats
Ifulethi eliseMadrid linekamelo lokulala elingu-1 futhi likwazi ukuhlala abantu abangu-2.
Ifulethi lisekhaya, lilula kakhulu, futhi lingamamitha angama-65.
Indawo itholakala ku-10 m ukusuka esitolo esikhulu saseCarrefour 24-7, amakhilomitha ayi-16 ukusuka e-Aeropuerto de Madrid-Barajas Adolfo Suárez Airport, 500 m ukusuka esiteshini sesitimela iSol Renfe, 2 km ukusuka esiteshini sesitimela i-Atocha Renfe, 50 m ukusuka eTirso de Molina metro, 200 m from Plaza Mayor.
Indawo itholakala ku-10 m ukusuka esitolo esikhulu saseCarrefour 24-7, amakhilomitha ayi-16 ukusuka e-Aeropuerto de Madrid-Barajas Adolfo Suárez Airport, 500 m ukusuka esiteshini sesitimela iSol Renfe, 2 km ukusuka esiteshini sesitimela i-Atocha Renfe, 50 m ukusuka eTirso de Molina metro, 200 m from Plaza Mayor. Indlu isendaweni elungele umndeni emaphakathi nedolobha.
Indawo yokuhlala ifakwe izinto ezilandelayo: i-lift, i-ayina, i-inthanethi (i-Wi-Fi), isomisi sezinwele, i-balcony, isiphephetha-moya (okushisayo/kubanda), i-air-conditioned, ama-TV ama-2.
Ekhishini elizimele le-vitroceramic, isiqandisi, i-microwave, i-oven, ifriji, umshini wokuwasha, isomisi, umshini wokuwasha izitsha, izitsha/indawo yokugezela, izinto zasekhishini, umshini wekhofi, i-toaster, iketela kanye nesihlungi soju.